Fadlan Iska Ilaaliya Aubameyang Iyo Mane - Xavi Oo Barcelona Uga Digay Inay Lasoo Saxeexdaan Xiddigaha Arsenal & Liverpool - Gool24.Net
Fadlan Iska Ilaaliya Aubameyang Iyo Mane – Xavi Oo Barcelona Uga Digay Inay Lasoo Saxeexdaan Xiddigaha Arsenal & Liverpool
Halyeygii hore ee Barcelona ee Xavi Hernandes ayaa sheegay in Sadio Mane iyo Pierre-Emerick Aubameyang aanay ku habboonayn kooxdiisa hore, waxaanu kula taliyey in gebi ahaanba aanay ku fikirin inay soo iibsadaan oo ay keenaan Camp Nou.
Aubameyang iyo Mane oo bandhig cajiib ah ka sameeyey horyaalka Premier League labadii sannadood ee ugu dambeeyey, fasal ciyaareedkii horena si wada jir ah ugu guulaystay kabta dahabka ah ee gool-dhalinta ayaa waxa lala xidhiidhinayaa in kooxahooda ay ka tegi doonaan marka uu suuqu furmo.
Xiddiga Arsenal ee Aubameyang oo uu sannad kali ahi ka hadhsan yahay heshiiskiisa Gunners ayaa kooxaha lala xidhiidhinayo waxa ka mid ah Barcelona, sidaas oo kalena Sadio Mane oo la rumaysan yahay inuu ka cadhaysan yahay go’aankii uu tababare Jurgen Klopp ku garab siiyey Virgil van Dijk xilligii uu u tartamayay abaal-marinta Ballon d’Or oo uu kaalinta afraad ka galay ayey Real Madrid ugu horreysaa liiska kooxaha damacsan, balse waxa iyaguna ku jira hirdankiisa Barcelona.
Xavi Hernandes oo saddex Champions League ku guuleystay intii uu Barcelona u ciyaarayay oo ahayd cimrigiisa oo dhan, waxa uu tababare Quique Setien usoo jeediyey in labadan laacib aanay la jaan-qaadi karaynin kooxdiisa ee ay tahay inuu ka baaqsado inuu damac ka galo, waxaanu yidhi: “Mane iyo Aubameyang waxay kugu dili karaan ciyaarta furan. Laakiin Barcelona waxay u baahan tahay laacibiin garanaya sida loogu dhaqaaqo firaaqooyinka yar.
“Waxaan ka fikirayaa ciyaartoyda la qabsan karta Barcelona, wayna adag tahay in la helo. Samuel Eto’o ayaa sax ku ahaa, sidoo kalena waxa hadda ku habboon Luis Suarez.”
Xavi waxa uu sheegay in xiddiga reer Brazil ee Neymar uu yahay nooc ciyaartoy ee ay Barcelona u baahan tahay, waxaanu yidhi: “Haddii aan dhinaca kubadda ka fiiriyo, waxa uu ka mid yahay saddexda ama shanta ciyaartoy ee ugu fiican kubadda cagta adduunka, waxaanan rajaynayaa inuu kusoo laabto Barcelona.
“Isku koox ayaanu ahayn, wax badan ayuu kusoo kordhin karaa. Dhaqan togan ayuu leeyahay, waxayna noqon lahayd saxeex aan caadi ahayn waana isbeddel sameeye.”